Iindaba -Imethacrylic acid kwimarike iyonke iya kuhlala isebenza phezulu
I-Methacrylic acid kwimarike iyonke iya kuhlala isebenza phezulu
Kutshanje, imarike yangaphakathi ye-methacrylic acid ibonakalise imeko yokunyusa phezulu, kugxilwe kurhwebo ngokubanzi, kwaye kwinqanaba lokubonelela liqhubeka liqinile, intengo yokwenyani yentengiselwano yamanzi amaninzi inyuke nge-1,500 yuan / itoni xa kuthelekiswa nexabiso lokuvala likaSeptemba, lityhalelwa kwi-14000-14500 yuan / ngetoni. Imakethi xa iyonke kunzima ukufumana ubonelelo olusezantsi, iziko lomxhuzulane liyaqhubeka nokunyuka. Sithini unobangela wexabiso lentengiso ye-methacrylic acid yakutshanje ebalekayo?
Okokuqala, inqanaba le-methacrylic acid yasekhaya yakutshanje liqinile, amaxabiso entengiso anyanzela ukusebenza.
Ukusukela ngo-Okthobha, ukuveliswa kwemethyl methacrylate kubavelisi abanokutshintsha yeyona nto iphambili, ke imveliso ye-methacrylate yehlile ngokufanelekileyo. Ukongeza, abanye abavelisi be-methacrylic acid basekhaya abanjengoLiaoning Hefa bakwinkqubo yokulungisa indawo yokupaka kwaye kulindeleke ukuba baqhubeke nokusebenza okuqhelekileyo ngo-Novemba, ekonyusa ukunqongophala kokunikezelwa kwe-methacrylic acid yasekhaya.
Ukungeniswa kwe-Okthobha kwimithombo ye-methacrylic acid ikwabonisa imeko yokwehla. Ngenxa yokuvalwa nokucinywa kwenyakatho-mpuma yeAsia isityalo se-methacrylic acid ngo-Okthobha, icala lokubonelela liyaqhubeka nokuqina. Ke ngoko, ukungeniswa kwe-methacrylic acid ngo-Okthobha kunqabile, kwaye unikezelo lwentengiso lweeodolo zokwenyani ziyaqhubeka nokuba nzima.
Okwesibini, phantsi kwemvelaphi yexesha lokuthengisa eliphakamileyo ngokwesiko, imeko engezantsi yemfuno yemethacrylic acid iyaqhubeka ukuphucula.
U-Okthobha ungqamana nexesha lokuthengisa ngokwesiko kumazantsi e-methacrylic acid yasekhaya, imeko ye-odolo iyonke yesiphelo sendawo esezantsi ibonisa imeko elungileyo. Thatha i-hydroxyethyl methacrylate esezantsi njengomzekelo. Okwangoku, elona xabiso liphambili kwintengiso yasekhaya lenyukele kwi-17,000-17,500 yuan / ton, ngelixa eyona mveliso iphambili ye-hydroxypropyl methacrylate inyuke yaya kwi-21,000-21,500 yuan / ton kwimarike ephambili. Olunye udidi, izongezo kunye nezinye iziphelo zendlela esezantsi yomjikelo womoya wokudola ikwabonisa imo yophuhliso olungcono.
Ukuchaphazeleka kukutyhala okuqinisekileyo kunye nokunyuka kwesiphelo esisezantsi esona sidingo, ibango lwasekhaya lwangoku lwe-methacrylic acid yokuthenga umoya iyaqhubeka ukukhula kakuhle.
Okwesithathu, imveliso yolungelelwaniso lwakutshanje kwimethyl methacrylate market ibonakalise ukunyuka okuphezulu, okukhuthaza ukunyuka kwexabiso lentengiso yasekhaya ye-methacrylate.
Ukusukela ekuqaleni kuka-Okthobha, intengo yentengiso yasekhaya ye-methyl methacrylate, imveliso ehambelana nayo ye-methacrylate yasekhaya, inyuselwe phezulu, kwaye imeko ye-oda iyonke iyaqhubeka ukulunga, amaxabiso aphambili okubonelela anyukele kwi-13,000-13,500 yuan / ngetoni Inqanaba lokubonelela libonisa imeko exineneyo, abathengisi balumkile ukuba bathengise ubukhulu becala, indawo yentengiselwano iyanda. Ngenxa yokunyuka okuphezulu kwexabiso lentengiso ye-methyl methacrylate yasekhaya, ukunyusa okuhambelanayo kwexabiso lemarike yeemethyl methacrylate ukugcina ukusebenza okuphezulu.
Ukushwankathela, ngenxa yomthwalo ophantsi wofakelo lwasekhaya lwe-methacrylic acid kunye nendawo eqinileyo yokubonelela kutsha nje, ibango leodolo yokwenyani kwiitheminali ezisezantsi ziyaqhubeka nokuphucula ixesha lokuphakama kwendabuko, kunye nexabiso lentengiso leemveliso ezinxulumene nemethyl methacrylate inyuka phezulu inqanaba. Ukuchatshazelwa zezi zinto zilapha ngasentla, intengiso yasekhaya ye-methacrylic acid iyonke iya kuhlala iyindlela ephezulu yokubaleka.